Hay'ada CTR oo Dood ku saabsan Caqabadaha dib-u-eegista Dastuurka ku soo gabagabeysay magaalada Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Hay’ada CTR oo Dood ku saabsan Caqabadaha dib-u-eegista Dastuurka ku soo...
Hay’ada CTR oo Dood ku saabsan Caqabadaha dib-u-eegista Dastuurka ku soo gabagabeysay magaalada Muqdisho
Hay’adda Cilmi Baarista ee loo soo gaabiyo CTR ayaa Magaalada Muqdisho ku soo gaba gabeysay shir soconayay mudo laba cisho ah kaasi oo lagaga hadlayay caqabadaha hortaagan dhameystirka Dastuurka KMG.
Xubnaha doodan ka qeybgalayay ayaa waxay isugu jireeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxaana kulanka kasoo qayb galay Xoghayaha guddiga lasocodka Dastuurka ee Baarlamaanka, wasiir ku xigeenka Dastuurka, Quburo ka socotay Jaamacadaha,Aqoonyahano iyo marti kale.
Xubnaha ka qeybgalayay kulankan ayaa soo jeediyey su’aalo ku saabsan mowduuca shirka iyagoo sheegay in la badiyo kulamada noocaan oo kale ah si bulshada loo gaarsiiyo halka uu marayo howlaha dib u eegista Dastuurka iyo caqabadaha ku hor gudban.
Agaasimaha Hay’adda CTR Cabdirisaaq Maxamed Maxamuud ayaa faah faahiyay waxyaabihii lagu soo qaaday intii kulanku socday isagoo xubnaha ka yimid Dowlad Goboleedyada uga mahad celiyay doorkii ay shirkan ku lahaayeen.
Sidoo kale Agaasimaha Hay’adda CTR ayaa sheegay in ay qorsheynayaan sidii ay u kordhin lahaayeen kulamada noocaan oo kale ah.
Dr. Xuseen Cabdi cilmi Wasiirka ku xigeenka wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS ayaa ugu dambeyn shirka soo xiray waxaase uu Hay’adda CTR uga mahad celiyay qabsoomidd shirkan isagoo sheegay in xiligii loo baahnaa lagu soo beegay madaama heer gaba gaba ah uu marayo dib-u-eegista dastuurka.
Sidaan oo kale ayaa Hay’addu waxay kulamada noocaan oo kale ah ku soo qabatay Xarumaha Maamul Goboleedyadda dalka.
dood ku saabsan caqabadaha dastuurka